यी हुन् विश्वका सबैभन्दा डरलाग्दा एयरपोर्टहरु, लुक्ला पहिलो स्थानमा
यदि तपाई प्लेन चढेर यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई रनवेको महत्वबारे बढी चासो हुन्छ । रनवे सजिलो छ भने यात्रा सहज र सुरक्षित हुन्छ । यदी रनवे नै कठिन छ भने यात्रा निकै डरलाग्दो हुन्छ । विश्वका कतिपय ठाउँहरुमा एकदमै डरलाग्दा एयरपोर्टहरु रहेका छन् जुन निकै डरलाग्दा छन् ।
५. आइस रनवे, अन्टार्टिका
अन्टार्टिकाको सबैभन्दा ठूलो रनवे आइस रनवे हो । उक्त रनवे समुन्द्री सतहभन्दा केवल १ फिट मात्रै माथि छ । रनवेको लम्बाइ भने १० हजार फिट रहेको छ । रनवेमा कुनै रेखा तथा संकेतहरु कोरिएका छैनन् । रनवे हिउँजस्तै सेतो रहेको कारणले गर्दा पाइलटलाई प्लेन अवतरण गर्न एकदमै कठिन हुन्छ ।
४. सावा एयरपोर्ट, नेदरल्याण्डस्
क्यारेबियन टापुमा एउटै मात्र एयरपोर्ट रहेको छ त्यसको नाम हो सावा द जुवान्चो एयरपोर्ट । विश्वको सबैभन्दा छोटो रनवे भएको एयरपोर्ट पनि यहि नै हो । यसको लम्बाई मात्र ३९६ मिटर रहेको छ । यसको लम्बाई छोटो रहेकै कारणले यो खतरनाक एयरपोर्टको सूचिमा परेको हो ।
३. कान्साई एयरपोर्ट, जापान
निकै रोचक तर खतरनाक एयरपोर्टको नाम हो कान्साई एयरपोर्ट जुन जापानको ओसाकामा रहेको छ । एयरपोर्ट समुन्द्रभन्दा जम्मा ५ मिटर मात्रै माथि रहेको छ । उक्त एयरपोर्टमा जम्मा दुईवटा रनवे रहेका छन् । जसमा एउटाको लम्बाई जम्मा ३५०० मिटर र अर्कोको ४००० मिटर रहेको छ । यदि ल्याण्ड गर्ने बेलामा पाइलटले सामान्य मात्रै गल्ती गर्यो भने प्लेन सिधै समुन्द्रमा खस्छ ।
२. मेडिरा एयरपोर्ट, पोर्चुगल
मेडिरा एयरपोर्ट समुन्द्री सतहभन्दा केवल १९० फिटको उचाईमा रहेको छ । ९१२४ फिट लम्बाई रहेको उक्त एयरपोर्ट पूल जस्तै रहेको छ । रनवेको चौडाई धेरै नभएको कारणलगर्दा प्लेन ल्याण्ड गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी छ । अनुभवी पाइलटहरुको अनुभव सुन्ने हो भने उनीहरुलाई उक्त रनवेमा ल्याण्ड गर्न निकै गाह्रो लाग्छ ।
१. लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल
नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको लुक्ला एयरपोर्ट संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो एयरपोर्ट हो । समुन्द्री सतहभन्दा ९१०० फिटको उचाइमा रहेको एयरपोर्टको रनवेको लम्बाई ४६० मिटर रहेको छ । पाइलटले एयरपोर्टमा ल्याण्ड गर्न लगेपछि ल्याण्ड गर्नुको बिल्कल्प हुँदैन ।
एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा आसाममा जारी प्रदर्शन भइनै रहेको अवस्थामा एक उच्च प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।